Minisitry ny fahasalamam-bahoaka Tsy lainga fa tena misy ny kitrotro
Mbola maro no tsy mino ny fisian’ny trangan’aretina kitrotro eto Madagasikara na dia efa maro aza ny olona matiny. Tsy sangisangy na lainga fa tena misy ny kitrotro ary mety hahafaty izany raha tsy vita amin’ny tokony ho izy ny vaksiny hoy ny Minisitry ny fahasalamam-bahoaka, ny Profesora Julio Rakotonirina tetsy Ambohidahy 15 martsa.
Manolona izany indrindra dia ho tohizana ny hetsika fanaovam-baksiny ny 25 martsa ka hatramin’ny 05 aprily 2019 ho avy izao. Ny lohahevitra voizina mandritra ny hetsika dia ny hoe: “ndao hiaraka, hiaro ny zanantsika amin’ny kitrotro, ataovy vaksiny ny zaza”. Faritra miisa 19 no hanaovana ny hetsika ary any Anjozorobe sy Ankazobe no voakasika ny amin’ny faritra Analamanga. Tanjona ny hanamafisana ny hery fiarovna efa ananan’ny zaza 6 volana ka hatramin’ny latsaky ny 10 taona na vita vaksiny na tsia, izay miisa 3 925 194 ao anatin’ny distrika 67 manerana ny Nosy.